သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): နန်းညွန့်လေး၏ လောကသို့အ၀င်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 08:47
Tuesday, 23 July 2013 at 10:25:00 BST
Tuesday, 23 July 2013 at 12:17:00 BST
ကိုယ်တိုင်လေးလည်း အားထုတ်စမ်းပါဦးလား...ဘယ့်နှာ အဆင့်တွေကျော်နေလိုက်တာ လွန်ပါရော...း)
ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကိုယ်တိုင်လည်း အခုထိလူမဖြစ်သေးဘူး...အင်း ဟန်ကြည်က ၀ီလျံမှ မဟုတ်ပေပဲကိုးဗျး)
Tuesday, 23 July 2013 at 15:02:00 BST
အဲလို အစွမ်းအစ ရှိမှာ :p ။
ပိုစ့်တွေ တက်လာလို့ ကူဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ
မောင်နက်ကျော်ကိုလည်း အမြန်တင်စေလိုပါကြောင်း ဗျာ ။
ဒါနဲ့ တစ်ဝါဆိုနေပြန်ပြီ လူပျိုကြီး :p ။
Tuesday, 23 July 2013 at 15:32:00 BST
Congratulation for your New Post!
Tuesday, 23 July 2013 at 21:13:00 BST
တကယ်ဆို ခလေးမွေးတာပဲ နည်းနည်းတော့ ပိုသလားလို့း)
သူတို့က အားနေတာကိုနော့် ကျနော်တော့ ၀ီလျှံ ခလေးထက် ကိုကိုမောင့် ခလေး ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် ။
Wednesday, 24 July 2013 at 05:04:00 BST
ခုတော့ ဝီလျံနဲ့ ကိတ်ကို ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းတာပေါ့
နောင် တဂျီးမင်းနဲ့တဂျီးမင်းကတော်ကို ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း လုပ်ချင်ပါတယ် :P
Wednesday, 24 July 2013 at 16:37:00 BST
Congratulation ! ...
မင်းသားဝီလျံနဲ့မင်းသမီးကိတ်တို့အပြင် စန်းစန်းပြောသလို သူကြီးမင်းတို့စုံတွဲကိုလဲ Pre ပေါ့ :P...
Saturday, 10 August 2013 at 03:02:00 BST
တဂျီးမင်း သူများတွေပြောသလိုပါပဲ ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း လုပ်ချင်ပါတယ်။ :D
Sunday, 1 September 2013 at 14:24:00 BST
မနေ့ညက အိပ်ခါနီးဆဲဆဲလေးမှာပဲ ဟိုဝှါကွဲသွားတဲ့အကြောင်းလေး တစ်ခါဖတ်ပြီးပြီ...ဒါနဲ့ တစ်ခုသတိရလို့ ပြောပြမယ်နော်။ မန်းလေးကနေ တောင်ကြီးပြန်တဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးတစ်စီးပေါ့ကွာ။ ခရီးသည်တွေထဲက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါတယ်။ လမ်းမှာ ကားဘီးပေါက်တော့ သူက ပျော်ပြီး ထ-အော်တယ်။ အဲဒါနဲ့ လူတွေက သူများတွေ စိတ်ညစ်နေတာ ခင်ဗျားက ဘာလို့ပျော်လဲပေ့ါ။ သူက ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့...ကားဘီးမကွဲရင် ကျုပ်ဟ၀ှါက ကွဲတော့မယ်တဲ့။ သူ ရှူးရှူးပေါက်ချင်နေတာ မပြောရဲဘဲ အောင့်အီးထားတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီမှန်းလည်း မသိတာ။ ဟိ...
Wednesday,4September 2013 at 06:59:00 BST